Ku saabsan Recetín | Recipe
Recipe waa baloog aad ka heli doonto waxyaabo badan oo asal ah oo loogu talagalay carruurta iyo kuwa aan sidaa u yareyn, xeelado karinta iyo macluumaad ku saabsan wax kasta oo la xiriira adduunka cunto karinta.
Hadaad rabto inaad ka feejignaato wax kasta oo ka dhaca dunida wax kariska ku qor qoraaladayada emailkaaga, halkaas oo aad isla markiiba ka heli doontid dhammaan cuntooyinka, farsamooyinka karinta iyo wararka ugu xiisaha badan.
Maxaan ka hadlaynaa Recetín?
En Recipe Waxaad ka heli doontaa cuntada sida koowaad, labaad, bilowga, macmacaanka; cuntooyinka adduunka oo dhan laga helo iyo xeelado loogu talagalay kuwa yaryar inay bartaan inay wax walba cunaan.
Mawduucyada aan uga hadlayno Recetín waxaa laga heli karaa bogga qaybaha webka.
Waxaan danaynaynaa akhristayaasha ... wax badan
Recipe, ka sakow noqoshada baloog aad ka akhrisan karto waxna ka baran karto sida loo kariyo cuntada, waxay kaloo ujeedkeedu tahay inay noqoto bog ka caawiya akhristayaashayada, meel aan kaga jawaabno su'aalaha isla markaana kaa caawin karno markii aad u abuureyso menus kuwa yaryar, baro tabo si aad u hesho cunto isku dheeli tiran iyo madadaalo jikada. Waad ka faalloon kartaa daabacadaha, noo soo dir kartaa wararka, soo-jeedimaha, shakiga, xiisaha ama cuntada sida loo maro foomka xiriirka.
Dhammaan cuntooyinka laga heli karo Recetin waxaa sameeyay annaga kooxda qoraalka. Dhammaantood waa kuugga leh sannado badan oo waayo-aragnimo ah oo diyaarinaya suxuunta si gaar ah loogu talagalay carruurta, sidaas darteed dammaanad-qaadku waa wadar waalidiinta.
Sidee loo xayeysiiyaa shirkaddaada ama sheygaaga Recetín?
Haddii shirkaddaada ama alaabadaadu ay si toos ah ula xiriirto adduunka wax karinta, waad nala soo xiriiri kartaa annaga foomka xiriirka waxaananu sida ugu dhakhsaha badan ugaga jawaabi doonnaa soo jeedin xayaysiis ah oo ku habboon waxa aad u baahan tahay.
Haddii aad rabto inaad la xiriirto Recipe waxaad ku sameyn kartaa adoo adeegsanaya kanaga foomka xiriirka.